10 -ka Sawir -qaade ee ugu mushaarka badan 2022 | Ganacsiyada
Bogga ugu weyn 10ka Sawir -qaade ee ugu mushaarka badan 2022
Sawir qaadistu waxay leedahay rajooyin waaweyn gaar ahaan haddii aad diyaar u tahay inaad shaqada gasho.
Dhiirrigelinta sawir qaadayaasha soo socda, waxaan soo dhejinnay maqaalkan oo ay ku jiraan sawir qaadayaasha ugu mushaharka badan 2022.
Hoos ka akhri iyaga oo fikrad ka qabo kartida kasbashada ee xirfadan sare.
Immisa ayey sameeyaan sawir qaadayaasha sawirrada qaata ee ugu sarreeya?
Si aad uga jawaabto su'aasha ah, "Intee in le'eg ayay sameeyaan sawir qaadayaasha ugu mushaharka badan", waa inaad sheegtaa gobolka ama goobta uu sawir-qaadaha ka shaqayn karo.
Si kastaba ha noqotee, waxay kuxirantahay macaamiishaada, khibraddaada, sumcaddaada, iyo goobtaada, iyo sidoo kale miisaaniyadda loo dejiyay ololaha xayeysiinta ama suuqgeynta, waxaad kasban kartaa illaa $ 15,000 ama ka badan bil kasta sawir qaade ahaan.
WAA MAXAY IS THE DARYEELKA SALARY WAA IN A Sawir -qaade?
Laga bilaabo Juun 28, 2021, celceliska dakhliga Sawir -qaadaha wuxuu ahaa $ 66,942. Si kastaba ha noqotee, inta badan waxay u dhexeysaa $ 53,508 iyo $ 76,085.
Waxaa muhiim ah in la ogaado in celceliska mushaharka sawir qaadaha ee Maraykanka uu kala duwanaan karo kuna tiirsan yahay arrimo badan oo u dhexeeya sannado waayo -aragnimo, goob, heer waxbarasho, iyo shahaado, waxqabad, shahaadooyin, xirfado la helay, iwm.
Hoos, waxaan ka wada hadli doonnaa sawir qaadayaasha ugu mushaharka badan.
WHO IS THE QANUUN Sawir -qaade IN THE WORLD?
Annie waxay labanlaabantay labada sawir qaade ee ugu taajirsan uguna mushaarka badan adduunka.
Sawiradeeda ayaa leh dareen gaar ah iyaga oo ah qaab dhab ah, tani waxay ka dhigaysaa shaqada Annie mid si fudud loo garan karo.
Sidoo kale, farshaxanka Annie wuxuu la mid yahay dunta caadiga ah ee daacadnimada iyo iftiinka shucuureed. Waxay caan ku tahay sawirada caanka ah ee caanka ah.
Dhab ahaantii, mid ka mid ah sawirrada ugu caansan ee majaladda Rolling Stone ee abid waa Leibovitz's Polaroid sawirka John Lennon iyo Yoko Ono, oo qaatay shan saacadood ka hor dilkii Lennon.
Annie waxay sii wadaa inay ka shaqeyso waaxda sawir qaadista ee caanka ah waana mid ka mid ah sawir qaadayaasha ugu mushaarka badan adduunka.
Intaa waxaa dheer, Annie waxay sidoo kale barataa sawir-qaadista sida fasallo iyo aqoon-is-weydaarsiyo. Vanity Fair waxay siisaa $3 milyan sanadkii, halka macaamiisha ganacsiga sida Louis Vuitton ay siiyaan tobanaan kun oo doolar maalin kasta.
Waxay u qalantaa lacag dhan $ 245 milyan.
Sidoo kale akhri: Barnaamijyada Sawirka ugu Fiican si kor loogu qaado Ciyaartaada Instagram -ka onlayn
LIST IYO Faahfaahin TOP 10 CADAADO BIXIYAY Sawir qaadayaasha IN 2022
Sawir qaadayaasha ugu mushaharka badan adduunka ayaa ka hooseeya. Amar gaar ah, waxay ku jiraan:
Sawir qaadaha oo ku dhashay 1976 magaalada Stockholm ayaa ku takhasusay dadka caanka ah iyo sawirada moodada. Waxa uu la soo shaqeeyay macaamiisha adduunka oo dhan. Farshaxankiisu waxa uu ka soo muuqday jaldaladaha majallado badan iyo xayaysiisyo badan.
Morgan Norman waa mid ka mid ah sawir qaadayaasha adduunka ugu mushaarka badan. Isagoo u toogtay daabacaado kala duwan, wakaaladaha xayaysiisyada, iyo xitaa calaamadaha duubista. Wuxuu ka qalin jabiyay Gamleby School of Photography wuxuuna bilaabay inuu madax-bannaani ahaan u shaqeeyo joornaalada kala duwan ka dib qalin-jabinta.
Morgan Norman wuxuu naftiisa u sameeyay sawir qaade farshaxan markii uu ku soo bandhigay qaar ka mid ah shaqadiisa Commedia Dell'arte iyo bandhigyada LIBIDO sanadka 2008.
Sawir -qaadahaani wuxuu leeyahay qaab sawir qaadis oo gaar ah oo laga jecel yahay warshadaha moodada.
Rasaasayaashiisa, sawir-qaadeyaashan ugu mushaharka badan ayaa caan ku ah adeegsiga aadka u wanaagsan ee iftiinka iyo midabka.
Wuxuu leeyahay sumcad layaab leh sida sawir qaade moodada ah sababtuna waa awooddiisa aan la taaban karin ee ah inuu moodalka, dharka, iyo agabka soo geliyo diiradda fiiqan.
Qof kasta oo wax yar ka fahmay sawir qaadista wuxuu awoodi doonaa inuu aqoonsado shaqadiisa isagoo fiirinaya.
Lynsey Addario wuxuu caan ku yahay qabashada sawirrada ceyriinka iyo mugdiga ah isagoo ku sii qulqulaya geesaha fog ee adduunka.
Iyadu waa saxafi sawir qaade waxayna inta badan diiradda saartaa xuquuqda aadanaha iyo arrimaha bulshada.
Waxay qabatay dhibaatooyinkii ku noolaa meelaha ay colaaduhu ka jiraan iyo dagaallada sida Afghanistan, Congo, Iraq, iyo Libya. La yaab ma laha in sawirradeeda lagu soo bandhigay New York Times, Newsweek, iyo Time magazine.
Daacadnimadeeda si ay u soo bandhigto xaqiiqooyinka qallafsan ee adduunka ayaa ah midda labaad. Intii ay hawsha ku jirtay, sidoo kale si xun ayaa loo garaacay waxaana loo geystay xadgudub galmo.
George Steinmetz waa sawir qaade u dhashay Mareykanka. Shaqadiisu waxay ka soo muuqatay daabacaadaha sida The New Yorker, Smithsonian, TIME, iyo The New York Times Magazine, wuxuuna inta badan wax ku darsadaa National Geographic.
Waxaa sidoo kale loo yaqaan Sawir-qaadaha Duuliyaha wuxuuna caan ku yahay sawir-qaadistiisa hawada sare.
Shaqadiisu waxay isku daraysaa lakabyo macluumaad oo naftooda tusaya markaad fiiriso sawir muddo dheer ah.
Wuxuu jecel yahay inuu la duulo baasaaboore ka dul duulaya diyaarad maxaa yeelay way ka raaxo badan tahay oo waxay u oggolaanaysaa inuu toogto sawirro hal abuur badan.
Daraasaddiisii ​​ugu dambaysay ee Quudinta Shiinaha, oo lagu soo bandhigay National Geographic, waxay muujineysaa sida Shiinuhu u quudiyo dadkiisa tirada badan inkasta oo uu haysto dhul beereed xaddidan.
George Steinmetz waxa uu ku fadhiyaa meel u dhaxaysa $100,000 iyo $1 milyan. Inkastoo aysan tani ahayn wadarta ugu badan, haddana waxay caddayn u tahay inuu yahay mid ka mid ah sawir qaadayaasha ugu mushaarka badan maanta.
Terry Richardson waa sawir -qaade iyo sawir -qaade ka yimid Mareykanka.
Waxa uu u shaqeeyay majaladaha sida Rolling Stone, GQ, Vogue, Vanity Fair, Harper's Bazaar, iD, iyo Vice, iyo sidoo kale ololeyaasha xayaysiinta ee Marc Jacobs, Aldo, Supreme, Sisley, Tom Ford, iyo Yves Saint Laurent.
Sawirada waa ay adag tahay in meel fog laga fiiriyo, xitaa haddii ay qaarkood kicinayaan. Dadka caanka ah, hedonism -ka, fikradaha galmada, qaawanaanta, iyo majaajillada la yaabka leh ayaa ah dhammaan mawduucyada caanka ku ah shaqada Terry Richardson.
Quruxsanaanta sawirrada ayaa qayb ka ah waxa iyaga ka dhigaya kuwo aad u xiiso badan. Sawirada Richardson aad bay u jinsi yihiin oo qaab ahaan waa punk.
Waa mid ka mid ah sawir qaadayaasha ugu mushaharka badan qiimihiisu u dhexeeyo $1 milyan iyo $5 milyan.
Sidoo kale akhri: Sida Lacag Loogu Sameeyo Sawir Qaade | 20 Siyaabood oo Fudud
Cindy Sherman waa hormuud ka ah sawir qaadista dumarka.
Waxay shaqadeeda ku bilawday taxane sawirro madow iyo caddaan ah oo caqabad ku ah habka aan u aragno haweenka Hollywoodka.
Cindy Sherman waa sawir-qaade aan la taaban karin oo si fiican loogu yaqaanay is-sawirkeeda fikradeed. Waxay caadiyan ku toogtaa sawirradeeda taxane u sheegaya sheeko.
Waxay u qalantaa lacag dhan $ 35 milyan.
6. JOOJI McCURRY
Steve McCurry waa sawir -qaade sawir qaade iyo sawir qaade ka yimid Mareykanka. Wuxuu caan ku yahay sawirro midabkiisa kiciya.
“Gabadha Afgaanistaan” waa sawirkiisii ​​ugu caansanaa. Gabadha indha cagaaran ayaa lagu soo bandhigay jaldiga majaladda National Geographic.
McCurry wuxuu u shaqeeyay National Geographic mashaariic dhowr ah. Waxa kale oo uu helay maamuusyo badan. Wuxuu qiimihiisu u dhexeeyaa $ 1.5 milyan ilaa $ 5 milyan.
7. TODOBAAD DHEER
Stephen Shore waa sawirqaade caan ku ah sawirradiisa walxaha maalinlaha ah iyo muuqaallada gudaha Mareykanka, iyo sidoo kale muuqaalkiisa banal iyo muuqaallada walxaha iyo adeegsiga midabka horudhac ee sawir-qaadista.
Meelaha aan caadiga ahayn iyo Meelaha Ameerika waa laba ka mid ah daabacayaashiisa, oo labaduba ay ka muuqdaan sawirro uu ku qaatay dalxiisyada baabuurta ee dalka gudihiisa 1970-yadii.
In kasta oo aan la hubin mushaharkiisa, haddana wuxuu haystaa lacag dhan $ 7 milyan.
Joel Meyerowitz waa waddo, sawir, iyo sawir qaade muuqaal ka yimid Mareykanka.
Waxa uu bilaabay in uu sawiro midab ahaan 1962-kii waxana uu ahaa taageere hore ee isticmaalka midabka xilli sawir-qaadista midabka sida farshaxan halis ah loo arkay shaki.
Sawir qaade kan ugu mushaarka badan ayaa heysta qiimihiisu dhan yahay $5 milyan.
9. GUURKA CREWDSON
Gregory Crewdson waa sawir qaade u dhashay Maraykanka. Waxa uu qaadaa toogashada guryaha Maraykanka iyo deriska.
Ugu horreyntii caan ku ahaa soo saarista muuqaalo riwaayado ah oo ku yaal hareeraha magaalada. Waxaa la rumeysan yahay inuu haysto lacag dhan $ 3 milyan.
Joe McNally waa sawir qaade ka tirsan National Geographic Society oo u tooganayay ururka ilaa 1987 -kii.
Wuxuu ku nool yahay Ridgefield, Connecticut, Magaalada New York. Joe wuxuu helay afar abaalmarin Sawir Saxaafadda Adduunka.
Sawir qaade kan ugu mushaharka badan waxa uu haystaa qiimihiisu u dhexeeya $1 milyan iyo $4 milyan iyo mushahar u dhexeeya $400K iyo $800k
Sawir qaadayaashan ugu mushaharka badan waxay gudbin karaan farriin waxayna ku sheegi karaan sheeko sawirkooda sixirka ah. Sawir qaadayaashani waxay dhiirigelin weyn u yihiin dhisidda sawir qaadayaasha.
Xusuusnow in sawir qaadistu aysan had iyo jeer ahayn raaxo farshaxan oo keliya, waxaa jira waxyaabo badan oo khatar ku jira (gaar ahaan kuwa daneeyayaasha ah). Sawir qaadayaashu waxay sawiraan sawirrada ma aha oo kaliya inay uruuriyaan abaalmarino laakiin sababta oo ah sawir qaadistu waa waxa ay quudiyaan.
Maadaama sawir qaadistu tahay xirfad shaqo, waxaanu dhignay liiskan sawir qaadayaasha ugu mushaharka badan adduunka.
Waa Kuwee Kuwa Ka Qalin -jabiya Kuleejka Ugu Lacagta Badan? | Xirfadaha Sare iyo Dugsiyada Sanadka 2022
WAA KUMA SALMANKA LACAGTA UGU SAREEYA? TOP 10 ILAALINTA GADIIDKA BAABUURTA